Cetamada | Accoustique (mg)
Ny fandraisam-peo ny trozona misy vombo lahy dia fomba anankiray ahafantarana ny ny misy azy. Nanomboka ny taona 2009, ny CNPS miaraka amin’ny Cétamada dia nanatontosa asa fikarohana iray momba ny fanarahana sy fandalinana ny hira ataon’ireo trozona misy vombo lahy.
Ny tetik’asa BAOBAB (Balise et acoustique pour l’observation des baleines à bosse) tamin’ny taona 2012 ka hatramin’ny taona 2014 dia nahafahana nametraka fitaovana fandraisam-peo an’ireo trozona mandritra ny 24ora/24 izay natao tamin’ny toerana 3 samy hafa tao Sainte Marie. Ny fitaovana fandraisam-peo anaty rano antsoina hoe “Hydrophones” dia napetraka tamin’ny toerana lalina (12 ka hatramin’ny 30 metatra) ary izy io dia nifandray tamin’ny “disque dur” izay fitaovana iray natao hampirimana ireo horonam-peo azo.
Ny fandraisam-peo dia afaka atao eny ambonin’ny sambo ihany koa, amin’ny alalan’ilay fitaovana antsoina hoe “hydrophone” ihany, izay alentika any amin’ny toerana manakaiky ny misy ny trozona lahy mihira ao anaty ranomasina.
Ny tanjona eto dia mandinika ny trozona lahy mihira mba ahafantarana ny toerana misy azy ireo. Tamin’izany koa no nahafahana nanavaka ny firafitry ny hiran’ireo trozona lahy tsirairay aryny lanjan’’izany hira izany mandritra ny fotoana fiterahany.